SONATA-CANTATA: ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒနှင့် အယူဝါဒကွန်ရက်
အဖိုးတန်တဲ့ ပို့စ်ပါခင်ဗျာ ... အေးအေးဆေးဆေး တွေးတွေးဆဆကို ဖတ်သွားပါတယ် .. နောင်လည်း ဒီလိုပို့စ်မျိုးလေးတွေ အလျဉ်းသင့်သလိုရေးပါဦးခင်ဗျာ
ကိုဧရာ- ကျမ ကြိုးစားပြီး ဖတ်ပါတယ်။ အင်မတန် နက်နဲ ..လက်ဝင်တဲ့.. ဘာသာ အယူဝါဒ ဆိုတဲ့ အပေါ်က.. ပိုင်းခြားပြမူ တခုလို့ မြင်ပါတယ်။
Thanks! I read "luthay lu phit " accidentally . After that,My hindrance is developing rapidly in addition to my little knowledge and thought base on so-called common sense. Your post may steer my thought to right view. Thank again.
လူသေလူဖြစ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို မထောက်ခံချင်ပါဘူး. အခုလို အချက်အလက်နဲ့ ရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
ပီးတော့ အခုတလော ရတနာ ဆိုတဲ့ ဘလော့မှာ..
ကိုယ်သိခဲ့တဲ့တရားတွေကို ..ဘာမှန်းမသိတဲ့ ပဲ ဒွိဟတွေ ဖြစ်အောင်လုပ်နေပါတယ်။ ကွဲပြားရှင်းလင်းအောင် ဖတ်ရမလားလို့ မျှော်နေပါတယ်။ အမသီတာချစ်ချစ်ကြီး ... အကို ကိုဧရာ..။
အရေးကြိးတဲ့အချက်လေးတွေကို ထုတ်နှုတ်ရေးပြသွားတော့ အရင်က မသိခဲ့တာတွေ ရှင်းကနဲ ဖြစ်သွားပါတယ်ဆရာ… နှိုင်းယှဉ်ပြသွားတော့ ပိုလို့ တောင် ရှင်းသွားပါတယ်… ဒီတိုင်းမေးခွန်းမေးဆို ဘယ်ကစမေးရမှန်းမသိတာကြောင့် ကျွန်မတို့ လိုလူမျိုးတွေအတွက် ဒီလိုဆောင်းပါးလေးတွေ သိပ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်… တန်ဖိုးကြီးတဲ့စာတပုဒ်အတွက် ကျေးဇူးတင်လေးစားမိပါတယ်ဆရာ…
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာ ဖိုရမ်မှာလည်း ဒီဝါဒကြောင်း စကားတွေ ပြောနေကြရတာကိုး
ဆရာ... ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ သိနေတာကို သူများကမေးလာရင် ဘယ်လိုဖြေရမယ်မှန်းမသိ၊ မရှင်းမလင်းဖြစ်မှာစိုးတာတွေ အများကြီးကနေ ဒီစာကိုဖတ်လိုက်ရတာ တကယ်ကို မြူတိမ်ကင်းစင်သွားတဲ့ ကောင်းကင်လို ရှင်းကနဲဖြစ်သွားစေရတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာ... သူငယ်ချင်းတွေလဲ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
သိသင့် သိထိုက်တာတွေ အများကြီးသိရလို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်..
မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်မှာလည်း ဒီဝါဒ လာဖြန့်နေပါတယ်။
ကျနော်လည်း မအားတာနဲ့ အသေးစိတ် ပြန်မဆွေးနွေးနိုင်သေး ပါဘူး။
မင်ဘာ ၂-ယောက်က ဒီပို့စ်ကို အဲဒီမှာ လာတင်ပေးသွားကြပါတယ်။
ူသာသနာတော်အတွက် အကျိုးရှိလှပါတယ်ဗျာ ...
သိပ်ကောင်းတဲ့ ဝေမျှမှု့လေးပါ။ ဒီဝါဒကို အခုမှသိဖတ်ဖူးတာပါ။ အသေးစိတ်ကို တခါတည်းသိသွားရတော့ ၀မ်းသာတယ်။ ရှေ့လျောက်လဲ သာသနာအကျိုး ဆထက်တပိုး သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေနော့။
“အရာရာဟာ ရှေးဘ၀ကပြုခဲ့တဲ့ ကံတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာ, ယခုဘ၀မှာ အရင်ဘ၀က ကံတွေက အကျိုးပေးနေကြတာ”လို့ ယူဆတာမျိုးကို ဗုဒ္ဓက အယူမှား ပုဗ္ဗေကတဟေတုဒိဋ္ဌိ (ရှေးကပြုသော အကြောင်းဟူသည့် အယူ)လို့ ဟောကြားခဲ့တာ မှန်ပါတယ်။ "
နဲ့ပတ်သတိပြီးတော့.. သိပ်နားမလည်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်.. "ယခုဘ၀မှာ အရင်ဘ၀က ကံတွေက အကျိုးပေးနေကြတာ" ဆိုတာကိုပဲအမြဲလိုလိုနှလုံးသွင်းနေမိလို့ပါ။
"ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒနှင့် အယူဝါဒကွန်ရက်" တွေကိုကြားသိရတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့.. လန့်လာတယ်။ အခံရှိမထားရင် သူတို့ပြောတာ မှန်သယောင်ယောင် ထင်မိမှာဆိုးလို့ ဗုဒ္ဓဝါဒ ကို ဒီထက်သေချာသိအောင်လုပ်ရအုံးမယ်၊ ပြီးတော့ဒီဘဝမှာ တတ်နိုင်သလောက်...ပါရမီတွေဖြည့်ထားရမယ်။
ထေရ၀ါဒ သာသနာအတွက် အကျိုးများတဲ့ ရေးသားမှုလေးပါ။ ကူးယူသိမ်းထားလိုက်ပါတယ်။
ဒီစာလေးကို ကြိုက်လွန်းလို့ ကျွန်တော့် ဘလောက်မှာ လင့်ပြီး ညွှန်းပေးပါရစေခင်ဗျာ
ရပါတယ် Nay Lin ခင်ဗျာ
သိပ်ကောင်းတဲ့ ပိုစ့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုဧရာ...
ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ သေချာ နက်နက်နဲနဲ လေ့လာလေလေ အဖိုးတန်ကြောင်းသိလာလေလေ ဆိုတဲ့ ဘာသာမျိုးပါ။
မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကျော်လွန်တဲ့ ပညာဓိက ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုကိုးကွယ်နိုင်ကြသူတွေ ဆထက်တပိုး တိုးပါစေ....
အသစ်တင်ထားတာတော့ တွေ့နေတာ ကြာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုမှ အချိန်မရလို့ ပြီးအောင် မဖတ်ဖြစ်ဘူး။ ဒီလို စာမျိုးကို သုတ်သုတ်လာ သုတ်သုတ်ဖတ်သွားဖို့လည်း မဖြစ်ပါဘူး။ အသေအချာ အချိန်ပေးဖို့ လိုလို့ အခုမှ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဧရာ ပို့စ်လေးက ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် တကယ်ကို တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မိဘအသိုင်းအ၀ိုင်းက ဆင်းသက်လာတဲ့ သူတွေကိုယ်တိုင် အတူးသဖြင့် ခေတ်လူငယ်တွေနဲ့ သိပ္ပံပညာတတ် အတော်များများက ကိုဧရာ ပြောတဲ့ ပစ္စုပ္ပန် ကမ္မ၀ါဒကိုပဲ ယုံကြည်တာ တွေ့ရပါတယ်။ ရှေးဘ၀ နောက်ဘ၀နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကံ၊ ကံ၏အကျိုးကို မယုံကြည်ကြဘူး။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း ဒီလိုရှိခဲ့ပေမယ့် ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်ရဲ့ ရှေးဘ၀နောက်ဘ၀က ကျွန်မကို ချွတ်ပေးလိုက်လို့ အကျွတ်တရား ရသွားပါတယ်။ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်က ကျွန်မအတွက် တကယ်ပဲ ကျေးဇူးကြီးမားလှတယ်။ မျက်စိနဲ့ တိုက်ရိုက်တွေ့ရတဲ့ လူ့ဘုံ၊ တိရိစ္ဆာန်ဘုံကိုပဲ လက်ခံကြပြီး မမြင်ရတဲ့ နတ်တွေ ဗြဟ္မာတွေကို ကျွန်မ အရင်က မယုံခဲ့ဘူး။ သိပ္ပံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဥပမာပေးရင်လည်း ကျွန်မတို့ ၁၂ တန်းက biology ဘာသာ သင်ရတုန်းက လူ့ခန္ဓာကိုယ် တခုလုံးမှာ micro-organism တွေ ကပ်နေတယ်ဆိုတာ စာတွေ့သင်ရတဲ့အချိန်မှာ သိပ်လက်မခံချင်ဘူး။ ရေချိုးထားတဲ့သူမှာ ဘယ်ရှိမလဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းရောက်လို့ ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ရပါတယ်။ ဂျယ်လီခွက်ထဲမှာ ကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ရဲ့ လက်မဆေးခင် နှိပ်ထားတဲ့လက်မအရာ၊ လက်ဆေးပြီး ခြောက်အောင် သုတ်ထးတဲ့ လက်မအရာ၊ မိမိပါးစပ်ထဲမှာ ဂွမ်းတံနဲ့ ခြစ်ယူပြီး ဂျယ်လီခွက်မှာ သုတ်ထားတဲ့ နေရာ၊ အခုလောလောဆယ် ပိုးသတ်ဆေးတွေနဲ့ သန့်ရှင်းရေး လုပ်သွားတဲ့ ဘီရိုထဲမှာ ဂွမ်းတံနဲ့ ခြစ်ပြီးယူထားတဲ့ ဂျယ်လီခွက် အဲဒီလေးခုကို အဖုံးလုံအောင်ဖုံးပြီး နောက်နေ့ မိုက်ခရိုစကုပ်အောက်မှာ ကြည့်လိုက်တော့ ဘီရိုထဲက ခြစ်ထားတဲ့ခွက်ကလွဲရင် ကျန်တဲ့ ဂျယ်လီခွက်တွေထဲမှာ ပိုးမွှားတွေ ရှိနေတာကို တအံ့တသြ တွေ့ရမှ ကျွန်မတို့ ဘယ်လိ်ုပဲ ရေချိုးထား သွားတိုက်ထားပေမယ့် ကျွန်မတို့ ပါးစပ်အပါအ၀င် ခန္ဓာကိုယ် တခုလုံးမှာ ပိုးမွှားတွေ အမြဲရှိနေပါလားဆိုတာ သိရတယ်။ ဒီလိုပဲ သာမန်မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်လို့ မရှိဘူးလို့ ပြောလို့မရသလို ဥာဏ်မျက်စိနဲ့ ကြည့်မှ မြင်နိုင်တဲ့ အရာတွေလည်း အများကြီး ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာ သုံးသပ်မိတဲ့ တနေ့မှာ ရှေးဘ၀၊ နောက်ဘ၀ ကံ၊ ကံ၏အကျိုး အပါအ၀င် နတ်ဘုံ ဗြဟ္မာဘုံတွေဆိုတာဟာလည်း တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာ တရားအတွေ့အကြုံအရ ဒါမှမဟုတ် အခုလို ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုအရ ဘယ်သူမဆို လက်ခံကြလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မထင်တယ်။
( Double-slit experiment ) တွင်
ရှင်းပြထားပါသည်။ Video File ကို http://www.youtube.com/watch?v=DfPeprQ7oGc တွင်ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်
( Part2) Translation
သိပ်ကိုကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရောက်ပြီး အခြားဘာသာဝင်တွေနဲ့
အနေနီးရာကနေ မိရိုးဖလာ ဘာသာကို အချို့အပိုင်းတွေမှာ သံသယနဲနဲဝင်ခဲ့မိတာ အမှန်ပါ။ အခုတော့ လုံးဝရှင်းသွားပါပြီ။ Ma Nge Naing ပြောတဲ့ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် စာအုပ်လဲ ၀ယ်ဖတ်လိုက်ပါဦးမယ်။ နောက်လဲ အဆင်သင့်ရင် ဘာသာတရားနဲ့ ပတ်သက်ပြီးအကျိုးအကြောင်းဆက်စပ် ရှင်းပြနိုင်တဲ့ ပိုစ့်လေးတွေတင်ပါဦးနော်။ ငယ်ကတည်းက ခုထိ ဘုရားတရားကို အင်မတန်လုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဒီ့ထက် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ယုံကြည်သက်ဝင်စွာ သံသရာလွတ်ကြောင်းအထိလုပ်ချင်တာပါ။
စီးပွါးတက်ရုံ၊ ဘေးကင်းရုံ၊ ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ မလုပ်ချင်တော့တာပါ။ခုလောလောဆယ် ဦးဆန်းထွန်းရဲ့ စာအုပ်တွေလဲ ဖတ်နေပါတယ်။
ဦးဇင်း တစ်ပါး ဘုန်းကြီး တစ်းပါးပေါ့။မခင်ဦးမေဆီက လင့်ကနေ ဝင်ရင်း ရောက်လာပါတယ်။ပြောမယ်ဆို ပြောစရာတွေ အများကြီး ပါ။အဓိက အချက်က အခု ပို့လေးအတွက် ရေးသူကို ချီးကျူးချင်တာ ..ပို့ကို ဖတ်ရလို့ ဝမ်းသာမိကြောင်း ပြောချင်တာပါပဲ။ဟုတ်တယ် ..ဘာသာရေးစကားတွေကို အပေါ်ယံ အမြင်နဲ့ ကောက်ချက်ချဖို့ မလွယ်ပါဘူး။အကောင်းရှိရင် အဆိုးရှိမယ် ဆိုတာ လက်ခံရမယ့် သဘောပါ..ဒါပေမယ့် ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ အမြင်မတော်တဲ့ နေရာ များနေသလိုပဲ ခံစားရတယ်။အမြင်တော်၏ မတော်၏ မဝေဘန်မိအောင် ပဲ နေလာတတ်ပါတယ်။ဒီလို အစစ်အမှန် လေးစားစရာ အရေးမျိုး အသိမျိုး ရှိနေသေးတယ် ..သိရတော့ တကယ် ကျေနပ်မိပါတယ်။ခေတ်အရ စာပေနှံ့စပ်ဖို့လဲ လိုသလို ကိုယ်ပိုင် သိမြင် ထိုးထွင်း သိမြင်မှုတွေ လဲ လိုမယ် ထင်ပါတယ်။ပို့စ်ရှင် ဘလောဂ်ရှင်နဲ့တကွ လေ့လာသူ အားလုံး ထိုက်သင့်ရာရာ ထိုးထွင်း သိမြင်မှုတွေ ရနိုင်ကြပါစေ ...ဆုတောင်းပေးရင်း နိဂုမ်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်ရဲ့ ရှေးဘ၀ နောက်ဘ၀ စာအုပ်ဝယ်ဖတ်ဖို့ မလွယ်ရင်ဒီမှာ download လုပ်လို့ ရပါတယ်..
စိတ်ထားတာမှန်ပါတယ်.. ဒီတရားလေးနာကြည့်ရင် ပို့ ပြည်စုံသွားမယ်..
စာရေးဆရာ မြသန်းစံက မြစိမ်းတောင် ဆရာတော်ကို မေးသွားတဲ့ မေးခွန်းလေးနဲ့ ဆင်ပါတယ်.. ဆရာတော် ရှင်းပြသွားတာ တော်တော် ရှင်းလင်းပြီး ပြည်စုံပါတယ်..
က နံပါတ် ၅၂ ကိုနာကြည့်ပါ.. (နံပါတ်၄၀ မဟုတ်ပါဘူး).. မှတ်သားစရာတွေအများကြီးပါပါတယ်..
စာလာဖတ်ပြီး ဆွေးနွေးအကြံပေးကြသူများ, ပြန်လည်ဖော်ပြပေးကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ စာအုပ်အညွှန်းတွေ, link တွေပေးသွားတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အလှတရားရဲ့ http://www.ahlataya.com/2009/09/blog-post_08.html မှာ “ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒကို စာပေတင်၍ စစ်ဆေးချက်” နှင့် အရှင်ကောဝိဒရဲ့ “ဗုဒ္ဓ၏ ဗုဒ္ဓ၀ါဒ” e-book တင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ http://www.dhammadownload.com/ မှာ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်ရဲ့ စာအုပ်နှင့် မြစိမ်းတောင်ဆရာတော်ရဲ့ တရားတော်တွေအပြင် မူရင်းပါဠိတော် မြန်မာပြန်များ
(http://www.dhammadownload.com/MyanmarTipitaka-eBook.htm) နှင့် အခြားစိတ်ဝင်စားစရာ ဓမ္မစာအုပ်များကိုလည်း ဓမ္မဒါနပြုထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ပင်ကိုယ်ဓါတ်ခံညံ့လို့ အခြေမခိုင်ရတဲ့အထဲ ဒီပစ္စုပ္ပန်ကမဝါဒကြီးလာရှပ်တော့ ကျွန်တော်မှာ သောပြင်လွှတ်တဲ့ခွေးပမာ ခိုလှုံစရာမရှိသလောက် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အခု ကိုဧရာရဲ့ ရှင်းလင်းချက် ဖတ်ရှု့လိုက်ရမှပဲ ကန္တာရခရီးသွားတယောက် အေးရိပ်မှာစမ်းရေသောက်လိုက်ရသလို အလွန်တရာပဲ ဧမြသွားရပါတော့တယ် ကျေးဇူးပါခင်ဗျား
လူလူချင်း ဆက်ဆံတာလို့ယူတာထက် .. လူ့အဖွဲ့အစည်း လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းလို့ မြင်ရင် ပိုမှန်မယ်ထင်မိပါတယ်.. အစိုးရပစ္စည်းခိုးရင် အပြစ်မဖြစ်လို့ ပစ္စုပ်ပန်က ယူဆတယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးကို သူတို့ဘယ်လိုပြောတယ်ဆိုတဲ့ အကိုးအကားလေးဖတ်ဖူးချင်ပါတယ်.. ကျနော်ဖတ်တာ မတွေ့မိလို့ပါ..
သူတို့ ရဲ့ သင်ပြမှုမှာ.. လူလူချင်းဆက်ဆံတာ လို့ ယူတာထက်.. လူ့အဖွဲ့ အစည်း လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု လို့ ယူရင် ပိုမှန်မလားမသိဘူး.. အစိုးရပစ္စည်းခိုးရင် အပြစ်မရှိလို့ ဘယ်လို ပြောထားလဲ ဆိုတာ လင့်လေးပေးပါလားခင်ဗျာ.. ကျနော် လည်းလေ့လာနေတာ မတွေ့မိလို့ပါ..
ကိုဇော်မိုး... လင့်က ပို့စ်ရဲ့ ဒုတိယပိုဒ်မှာ ပါပါတယ်။ စာပိုဒ်အချို့ကို အောက်မှာ ကောက်နှုတ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
“… ပါဏာတိပါတ်၊ လူကို သတ်မှ။ အလွတ်တခြား ပိုးမှုန်မွှားနှင့်၊ အများတိရစ္ဆာန်၊ သက်ရှိမှန်က၊ မကျန်သစ်ပင်၊ သတ်ခံလျှင်မူ၊ သတ်မဟူဘူး…” (မိုးပြာကျောင်းမှ ပေးစာများ၊ နှာ-၉၃-၉၄)
“… အစိုးရပစ္စည်းမှာ သူ့ထိလျှင် အရေးယူဖို့ ဥပဒေပြုပြီးသား ရှိနေပါတယ်။ အရေးယူရမှာကို ခံနိုင်လျှင် ဒါမှမဟုတ် အရေးမယူအောင် တတ်နိုင်လျှင် ထိနိုင်တာပဲ။ တရားဓမ္မရဲ့ အကျိုးအပြစ်သတ်မှတ်နေဖို့ မရှိပါဘူး။ တရားဓမ္မဟာ လူလူချင်းအတွက် စည်းကမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရာရာအတွက် စည်းကမ်း မဟုတ်ပါဘူး။… ” (မိုးပြာကျောင်းမှ ပေးစာများ၊ နှာ-၁၀၇)
Let's me share this artical in facebook. I will also mention the link to your blog there... Thanks.
ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်ခြင်း (သရဏဂုံ)
ဆို က ရေး တီး နှင့် အမေပေးတဲ့လက်ဆောင်
ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ၏ တရားပွဲ
စင်္ကာပူ မြို့ကြီးကိုတဲ့ ယောင်လည်လည် ရောက်လာခဲ့တယ်။